Massimo Dutti wuxuu soo bandhigayaa guri daabacan oo cusub SS21: Edgy New | Bezzia
Maria vazquez | 09/06/2021 18:00 | Maxaan xirtaa
Massimo Dutti ayaa dhowaan soo bandhigay mid cusub tifaftirka guga-xagaaga 2021. Tifatirayaal cinwaankeedu yahay 'New Edgy' wuxuu noo soo bandhigayaa soo-jeedinno maalin-laha ah waana lala wadaagayaa kuwa kale waxaa tafatiray shirkadda hore ballanqaadka ah palette dabiiciga ah, in kasta oo leh nuances cajiib ah.
Markaad eegto aragtida koowaad ee 'New Edgy', waxa ugu horeeya ee indhahaagu qabanayaan waa caan ka noqoshada ay dharka qaarkiis qaataan sida dharka linenka ah, shaatiga dharka lagu xidho ee dheeha lagu xidho iyo funaanadaha feeraha ah. Dharka loogu talagalay ku raaxayso xagaaga raaxada.
1 Midabada midabka leh
2 Mashiinka 'Tie Dye'
3 Waxyaabaha muhiimka u ah Massimo Dutti
Midabada midabka leh
Caadaysatay in badan tifaftirka tifaftirka marka ay timaado midabka, ah sida palette midab ballaadhan taas oo shirkaddu ku sharraxday arrintan. Midab dhalaalaya oo midabyo dhexdhexaad ah lagu daro kuwa kale ee firfircoon sida liinta, casaanka iyo cagaarka.
Mashiinka 'Tie Dye'
Guriga daabacaadda oo dharka badankiisu caadi yihiin, dharka dharka lagu xidho dharka laguma arko. Waxaan runtii jecelahay shaatiga iyo goonnada loo dhigay midabbada midabka cad, buniga iyo buluugga ah ee ka samaysan cudbiga iyo dharka xariirta. Laakiin xitaa in ka sii badan ayaa shaati ku jira midabbada oranjiga iyo casaanka, oo ka samaysan 100% dhar ramie ah.
Waxyaabaha muhiimka u ah Massimo Dutti
ka surwaal suuman oo bermuda gaagaaban waxay u noqdeen dhar muhiim u ah Massimo Dutti xilli ciyaareedkan. Midabada dhexdhexaadka ah waa kuwo aad u kala jaad ah, si kastaba ha noqotee, indhaha kama qaadi karno tusaalaha laga heli karo cagaarka iyo guduudka tifaftirkaan. Oo annaguna waxaannu jecel nahay fikradda ah in lagu daro shaati iyo jaakad laba jibbaaran.
Knitwear ayaa fure kale u ah ururinta, gaar ahaan goonnada jilicsan iyo dusha sare ee taangiga feeraha. Kuwaas oo ay weheliyaan sidoo kale waxay istaagaan shaati-yada ama dharka shaati-ka ee u adeega jaakad iyo midabbada sida beige ama khaki oo wax walba isku dara.
Ma jeceshahay soo-jeedimaha cusub ee ka imanaya shirkadda kooxda Inditex?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » fashion » Maxaan xirtaa » Massimo Dutti wuxuu soo bandhigayaa guriga daabacaada cusub ee SS21: New Edgy
Sida loola qabsado wixii ka dambeeya xiriirka sunta ah